सुदूरपश्चिमममा नेपाल आइडल–३ को अडिसन नहुने, चौतर्फी आलोचना - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसन भदौ ३१ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । तर, गत वर्ष नेपाल आइडल सिजन–२ को विजेता शहर धनगढीमा भने यसपटक अडिसन नहुने आयोजकले जनाएको छ ।
आयोजकका अनुसार यसपटक काठमाडौं, पोखरा, विरगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज र विर्तामोड गरी ६ स्थानमा मात्रै अडिसन हुनेछ ।
नेपाल आइडलको पहिलो सिजनमा पनि सुदूरपश्चिममा अडिसन भएको थिएन । तर, काठमाडौंबाटै अडिसन दिएर सुदूरपश्चिमकी सध्या जोशी टप–९ सम्म पुगेकी थिइन् । अन्य थुप्रै नवप्रतिभाहरूले काठमाडौंलगायत अन्य ठाउँबाट अडिसन दिनुपर्ने बाध्यता थियो ।
दोस्रो सिजनमा पहिलो पटक धनगढीमा अडिसन हुँदा धनगढीबाट सहभागी कञ्चनपुरका रवि वड विजेता बनेका थिए । रविसँगै धनगढीबाट रवि शर्मा, रमेश अर्याललगायत नवप्रतिभाले सहभागी जनाएका थिए । यसपटक सुदूरपश्चिममा अडिसन नहुने भएपछि धेरै नयाँ प्रतिभा अडिसन दिनबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।
गत वर्षको सिजन विजेता धनगढीमा नै अडिसन नहुने भएपछि त्यसको सामाजिक सञ्जलमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेपाल आइडलको आधिकारिक फेसवुक पेजमा भदौ ३१ गतेदेखि तेस्रो सिजनका लागि अडिसन हुने भनेर स्थानसहितको भिडियो हालिएको छ । धनगढी अडिसन नराखेको भन्दै उक्त भिडियोमा अधिकांशले नेपाल आइडलको आलोचना गरेका छन् ।
गत वर्षको विजेता स्थानमा नै अडिसन नराखेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आइडलको आलोचना गरिरहेका छन् । नेपाल आइडलले फेसबूकमामा राखेको भिडियोमा भीम बोहराले सुदूरपश्चिममा अडिसन नराखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्, ‘यो नेपाल आइडलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समावेश नगर्ने हो र? सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा रहेछ किन यस्तो मतभेद ?’
कमेन्टमै थोमस तेजु बोहराले नेपाल आइडललाई प्रश्न गर्दै आक्रोश पोखेका छन्, ‘हेल्लो नेपाल आइडलका वरिष्ठे…पूर्ब बिजेताको शहरमा अडिसन खोइ? हेप्ने? पोहाेर तर्सिए जस्तो छ नि?’
किन राखिएन ?
पहिलो सिजनमा धनगढी अडिसन नराखेको नेपाल आइडलले चर्को दबावपछि दोस्रो सिजनमा राखेको थियो । तर, तेस्रो सिजनमा फेरि अडिसन हटाएपछि आलोचनाको शिकार बन्नुपरेको छ । नेपाल आइडलले सुदूरपश्चिमलाई महत्व नदिएको भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
तर, नेपाल आइडलले भने नियमअनुसार नै धनगढीमा अडिसन नराखिएको दाबी गरेको छ । ‘यसमा कुनै पक्षपात, कसैलाई महत्व दिएको÷नदिएको भन्ने छैन,’ एभेरेष्ट दैनिकसँग नेपाल आइडलका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले तयारीको भिडियो पठाउन भनेका थियौं । जहाँबाट हामीलाई बढी भिडियो मेलमार्फत प्राप्त भयो, त्यही स्थानलाई छनौट गरेर अडिसन गर्न लागेका हौं ।’
सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये ७ जिल्ला पहाडी छन् । त्यहाँ इमेल, इन्टरनेट त के विजुलीसमेत अझैं सबै जिल्लामा पुग्न सकेको छैन । तर, ‘संगीतको शिखर’ भन्ने नारासहित सुरु हुन लागेको नेपाल आइडलले सुदूरपश्चिमको अवस्था र त्यहाँका नवप्रतिभाको भावनालाई बुझ्न सकेन । आइडलले सुदूरपश्चिमलाई मात्रै उपेक्षा गरेन, सम्पूर्ण नवप्रतिभालाई नै उपेक्षा गरेको छ । आफूमा भएको कला प्रस्फुटन गर्ने अवसरबाट बञ्चित गराएको छ । जसले नेपाल आइडल टिम सुदूरपश्चिमम देउडा गीत मात्रै गाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रेको देखिन्छ । त्यसकारण त्यो मानसिकताबाट आइडल टिमले माथि उड्न जरुरी छ ।
ट्याग्स: नेपाल आइडल, रवि वड